Sidee Cuniga Aragtidiisa u Kobacdaa? | Tuke Somalism - Tukesomalism.com
Aragtida cuniga waxay bilaabataa marki uu dhasho, laakiin uma arki karo waxyaabaha dhan si cad, ilmuhu tartiib tartiib ayuu wax u arkaa ilaa sanadka ugu horreeya ee nolosha. markii uu noqdo hal sano jir wuxuu arki karaa aduunka sida aan u aragno.
Ilmuhu waxuu arkaa in uu si cad u arko inuu kori doono, tusaale ahaan Awooda cunuga inuu noqdo mid fadhiisto, gurguurto, iyo lugahiisa ku socdo wuxuu ka dhigayaa maskaxdiisa mid firfircoon maxaa yeelay wuxuu helay macluumaad aad u fara badan. Maqaalkan waxaan ku eegi doonaa sida aragtida cunugga u kobocdo dhalashada ilaa uu gaaro hal sano jir.
Sidee Aragga Ilmuhu u koraa:
Ilmuhu wuxuu soo maray dhowr marxaladood ka hor intuusan si muuqata u muuqan.
Marxaladda koowaad waa marka cunugga dhasho: Aragtidiisu ma caddo, laakiin wuxuu arki karaa nalka iyo waxyaabaha isaga ka horreeya. waxaana u aragnaa inuu diirada saarayo nalka ama daaqadda, wuxuuna ka jawaabaa iftiinka badan.
Marxaladda labaad waa bisha koowaad iyo tan labaad dhalashada ka dib:
Marxaladdan ilmuhu wuxuu sii wadaa inuu arko masaafada u dhow, wuxuuna arki karaa qaabka qofka hayo oo si qoto dheer u fiiriyo, wuxuuna horumariyaa awoodda lagu arko midabada, laakiin ma kala saari karo midabada qaabkooda sida casaanka iyo midabka Orange, sidaa darteed waa in la siiyo midabyo dhal dhalaalayo cunugga. sidoo kale marxaladdan ilmuhu wuxuu bartaa sida loo xakameeyo indhaha oo xoogga loo saaro wax gaar ah, dareen ahaan inuu ku indho dheeraado shayga dhaqdhaqaaqiis.
Marxaladda saddexaad waa bisha saddexaad iyo afraad: Marxaladan ilmuhu wuxuu arki karaa waxyaabo si cad u muuqdo, oo waxaa xoogsanayo awooda wax lagu arko.
Marxaladda afaraad waa bisha shanaad iyo bisha siddeedaad:
Halkan waxaa ka muuqda horumar dhankasto ah xaga maskaxda iyo aragtidaba. wuxuu ku arki karaa waxyaabo illaa xad fog, wuxuuna ku arkayaa waxyaabo aad u yar, bishii siddeedaadna cunugga si muuqato ayuu u arki karaa dhammaan waxyaalaha ka hor imaado, waxuu marxaladdan kala saarayaa dadka.
Wejiga ugu dambeeya waa bisha sagaalaad iyo bisha laba iyo tobnaad: cuniga waxuu wax u arkaa sida dadka waaweyn. Waxuuna jecel yahay in uu dadka kudaydo dhaqamadooda. Halkaan waxaa ka qaadaneynaa in ilmaha ay raacaan waxaa aada ku tarbiyaysid. U horseeda ilmahaaga kheyreka si ay maskaxdoodo u la qabsato.
Tags: Sidee Cuniga Aragtidiisa u kobacdaa?
Next post Shaqo Noocee Ah Ayey Cuntada U Qabtaa Jirkaada?
Previous post Baro Muhiimada Quraacda - 7 Faa'ido ee Quraacda Leedahay
August 18, 2019 at 8:10 pm	— Reply
Faaidu badaan ayey ledahay cuntada qofkaste jirkisa ayu nafaqo ubaahan gaar ahaan maskaxda